Ny bateria maharitra sy maharitra ary maharitra ... | Androidsis
Ny bateria maharitra sy maharitra ary maharitra ...
Zack | | bateria, Finday, About us, Fitaovana hafa
Mandra-pahoviana ny batterin'ny smartphone-nao? 12 ora ... 1 andro zara raha?
Ny iray amin'ireo maharatsy ny fananana Smartphone mahery vaika amin'ny fampiasana sy fitaovana betsaka dia ny fanjifana avo ny bateria. Izany no antony ahitantsika any amin'ny fivarotana an-tserasera ny batterie alternativa maro an'isa ho an'ny Smartphone Android. Androany aho dia niresaka momba ny bateria niaraka tamin'ny fahaiza-manao avo indrindra hitako.
Amin'ny alàlan'ny fivarotana MyTrendyPhone.es afaka mahita ny mahavariana isika Batterie Galaxy S ny tsy misy hafa ary tsy misy tsy inona fa ny 3000mAh. Ny bateria izay avy amin'ny orinasa miaraka amin'ny Galaxy S dia 1500mAh.
Mahita bateria avo lenta sy avo lenta izahay. Izy io dia azo ampiasaina ho bateria fanoloana ary azo ampiakarina amin'ny fomba mitovy amin'ny batterie an'ny orinasa.
Nampitahako ny fampiasana isan'andro ny batterie misy ahy ary ity iray ity ary tokony hiaiky aho fa gaga nahafinaritra aho. Miaraka amin'ny baterian'ny orinasa ary manome azy fampiasana ara-dalàna: mampifandray ny 3G indraindray, fa ny ankamaroan'ny fotoana tsy fiasana, ny Wifi kilemaina, eo anelanelan'ny lalao sy ny fampiasana Internet adiny 1, antso sns. Amin'ny adiny 12 ny bateria dia amin'ny 25% na 30%. Na dia izany aza miaraka amin'ity bateria 3000mAh ity ao anatin'ny 12 ora dia nandany ahy 30% fotsiny Ary manisa izany fa nandao ny 3G foana aho ary isaky ny matetika dia nataoko niasa nametraka rindranasa izy, tamin'ny fampiasana ny fampiharana Facebook, Google+, marika sns.
Ka ity bateria ity dia mety maharitra hatramin'ny roa na telo andro ampiasaina raha tsy mila ampiakarina amin'ny fampiasana feno.
Ny bateria dia miaraka amina casing azy manokana ho an'ny Smartphone satria ny habeny ara-batana dia matavy indroa noho ny batterie mahazatra. Miaraka amin'ity bateria ity dia somary "matavy loatra" ny Smartphone.
Na eo aza izany dia tsy mahita fihemorana aho raha ampitahaina amin'ny ain'ny bateria omeny. Hitanay ihany koa fa misy vidiny lafo, € 25.60 ihany. Azo antoka fa vokatra fahazoan-dalana indrindra avy amin'ny karazana kojakoja Galaxy S.
naoty: (Ny bateria dia ho an'ny Samsung Galaxy S ary efa nosedraina tamin'io Smartphone io, na dia misy aza izany ho an'ny maodely finday smartphone hafa).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » bateria » Ny bateria maharitra sy maharitra ary maharitra ...
Fomba ahoana hanohana ny pejy feno volomaso indrindra! Ary koa, io finday io dia efa teny an-tsena hatry ny ela mba ho vaovao! Na izany na tsy izany, raha nanana bateria ho an'ny telefaona vaovao toa ny g.nexus… izy ireo.
Jereo ny naoty eo amin'ny faran'ny lahatsoratra:
Fanamarihana: "Ny bateria dia ho an'ny Samsung Galaxy S ary efa nosedraina tamin'io Smartphone io, na dia azo ampiasaina ho an'ny modely Smartphone hafa aza izy io."
Inona koa, ity bateria ity dia misy amin'ny Nexus S, miaraka amin'ny elanelam-potoana kely dia 2800 mAh.
RFOG dia hoy izy:
Dia tsy mitovy izany, sa tsy izany? Ho mpanamboatra mitovy, na andiany iray ihany, fa tsy hitovy ...
Valio ny RFOG
Naic fotsiny dia hoy izy:
ary inona no tadiavinao? hametraka bateria an-jatony hamela anao ho afa-po? maninona no tsy manao post raha tsy tianao?
Ho ahy ity mpiara-miasa tonga lafatra ity, efa ho avy ny galaxy s2 😀 «Fantatro fa maro ny mahery kokoa, saingy ity no finday avo lenta voalohany» ary tena tiako ny manampy 3200Mah hitako tao 🙂
Valiny tamin'i Simple Naic
Christian rodriguez barros dia hoy izy:
Tsia, raha mijanona hamaky ianao dia tsy mitovy ny milaza hoe "Ny bateria dia ho an'ny Samsung Galaxy S ary efa notsapaina tao amin'io Smartphone io, na dia azo ampiasaina ho an'ny modely Smartphone hafa aza" noho ny "Ny bateria dia an'ny SGS ary efa notsapaina tamin'io Smartphone io, na dia misy koa bateria ho an'ny maodely finday finday hafa »
Na dia toa mitovy aminao aza izy io, tsy dia mifanakaiky akory io, azony atao ny mangataka azy tsotra satria raha manana S2 sy S ianao ao an-trano dia te hampiasa ilay bateria ho an'ny iray na ny hafa ianao. (Na dia milaza aminao aza ny lojika fa tsy noho ilay fonony manokana, fa hey)
Ary hamboariko azy io dia tsy haiko raha azoko itokisana ny mari-pana nalain'ireto finday ireto rehefa omenao azy ireo ny fantsom-batana, raha miaraka amin'ny bateria 3000mah io dia vao mainka ho avo kokoa, indrindra rehefa mameno azy.
avy amin'ny zavatra novakiako, ny mpamorona ny kofehy dia manana batterie amin'ity karazana ity, sa tsy izany? Azonao atao ny mametraka ny fakana mari-pana sasantsasany amin'ny tsy miasa sy amin'ny vidiny feno.
Valiny tamin'i Christian Rodriguez Barros
"Nandany ahy fotsiny io"
Nandany ahy fotsiny izany.
Blacxnight dia hoy izy:
Izaho dia liana tamin'ny bateria manana fahaizana ambony kokoa ho an'ny GALAXY s2 efa ela, saingy tsy haiko hoe hatraiza ny fahatokisako bateria avy amina mpanamboatra tsy ofisialy. Ny tena mahavoa ahy dia ny Samsung 2000mah ofisialy fa hitako lafo loatra ho an'ny 350mah mihoatra ny stock. Voalaza fa 20% fotsiny ny bateria ... inona no hatao?
Mamaly an'i Blacxnight
Tena tiako ity iray ity ary ambonin'izany rehetra izany dia gaga tamin'ny fiainana bateria aho. Raha tsy mampaninona anao fa matavy ny telefaoninao dia mamporisika anao aho hamaky ilay pejy ary jereo ny batterie raha haharesy lahatra anao.
Fanamboarana dia hoy izy:
mila iray ho an'ny mb525 aho (motorola defy)
Valiny momba ny fananganana
Tuphoneshop dia hoy izy:
TuPhoneShop. Fitaovana ho an'ny tranga Blackberry, trano, fiarovana, arina, batery.
Manana kojakoja isan-karazany, blackberry, tranga, charger, bateria, headphone, telegrama, tsy misy tanana, tranga blackberry, accessories blackberry izahay.
Ary koa ny zava-drehetra amin'ny vidiny tsara indrindra. Fandefasana any Espana rehetra. Vokatra misy WARRANTY 2 taona. Manome faktiora izahay. 100% ORIGINAL.
Mamaly an'i Tuphoneshop
B0nesniffer dia hoy izy:
Nanontany aho raha hijery raha mandeha tsara 😀
Valiny amin'i B0nesniffer
Andrea Vasquez sary placeholder dia hoy izy:
Moa ve mifanaraka amin'ny Samsung Galaxy S2 ny batterie Samsung Galaxy S?
Valiny tamin'i Andrea Vasquez
Mandeha tsara izany mba hahazoana antoka fa maharitra kokoa izy io ary mandroroka ny Ace galaxy samsung
Valiny amin'i JAJAJAJ
basista dia hoy izy:
Namana tena tsara fa tsy mieritreritra ianao fa mitady charger ho an'ny bateria toy izao ity basy ity? satria miaraka amin'ny ozinina dia maharitra adiny 4 eo ho eo vao mavesatra na mihoatra
Valiny amin'ny basista
Fahatsiarovana an-telefaona ve? Aiza daholo ireo MB / GB an'ny fitaovako ireo?